Soo dejisan Core Temp 1.15 – Vessoft
WindowsNidaamkaTijaabada iyo TijaabooyinkaCore Temp
Bogga rasmiga ah: Core Temp
Core Temp – qalab yar oo lagu kormeerayo heerkulka processor ee nidaam waqti go’an. Software wuxuu soo bandhigi karaa xogta heerkulka ee processor kasta ee nidaamka iyo mid kasta oo kamid ah asaasiga. Core Temp wuxuu bixiyaa farsamooyinka farsamada ee faahfaahsan sida tusaale ahaan nooca iyo nooca processor, tirada tirooyinka, xawaaraha saacadda, CPUID, TDP, platform, iwm. Barnaamijka wuxuu ka kooban yahay qalab lagu hagaajinayo ka hortagga tooska ah ee kulaylka culeyska (CPU) iyo dejinta ogeysiisyada kiisaska lagu gaaro heerkul aad u adag. Sidoo kale Core Temp waxay taageertaa isku xirnaanta fiilooyinka ka yimaada kuwa horumarinta saddexaad si ay u ballaariyaan shaqadooda u gaarka ah.
La socoshada heerkulka mashiinka iyo asaasiga
Bandhigay sifooyinka processor
Goobaha ilaalinta ee kululaynta
Ka samee dariishadaha daaqada furan
Waxay taageertaa qalabka Intel, AMD iyo VIA
Soo dejisan Core Temp
Faallo ku saabsan Core Temp
Core Temp Xirfadaha la xiriira
Software ayaa si ay u abuuraan disk ee dalwaddii ka files images kala duwan. Feature ugu weyn ee software-ka waa virtualization ee archives kaas oo bixiya shaqada la files oo aan baahida loo qabo in ay ka saarida.
Macrium Reflect – softiweer lagu keydiyo diskigaaga oo dhan ama xogta gaar ah. Software-ka wuxuu taageeraa heerar sarreeya oo cadaadinta iyo duubista.